IKhabhinethi ehlaziyiweyo ye-Olympia w/iDokhi yaBucala eLake
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEvolve
Vumela amaxhala akho adada njengoko uphumla kule ndlu yokulala mi-3, igumbi lokuhlambela elinamagumbi ama-2 ekhebhini yokurenta elala isi-8 e-Olympia. Hlala kwiveranda ephambi kwechibi njengoko ubukele amaphenyane egudla amanzi neentaka zibhabha phezulu phezu kwemithi emide. Ngaphandle kwesandi samanzi aqengqelekayo elunxwemeni, usapho kunye nabahlobo banokuthatha ixesha lokubaleka isixeko esiphithizelayo ukuze bafumane ukuphumla okunoxolo kwindlu erentwayo ngeholide evakala ngathi likhaya.
Igumbi lokulala eliPhambili: Ibhedi yeKumkanikazi | Igumbi lokulala 2: Ibhedi yokumkanikazi | Igumbi lokulala 3: Iibhedi ezimbini zamawele | Igumbi lokuhlala elisezantsi: ISofa yokulala
Nge-1,400 yeenyawo ze-square yendawo yokuhlala ebekwe kakuhle, wonke umntu uya kufumana indawo yokuphumla emva kosuku olude ngaphandle kwechibi. Ipetroli ngesidlo esiphekwe ekhaya ngokusebenzisa ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, okanye uphume uye kwipatio apho unokufumana indawo yokupheka kwigrisi yegesi.
Yiya kwibalcony yomgangatho wesibini kwaye uqokelele itafile engaphandle ukuze ufumane amava okutya e-al fresco! Iglasi ejikeleza ibalcony enomthunzi ikunika umbono ocacileyo weLake Saint Clair njengoko izikhephe zidlula kunye nokutshona kwelanga entshona kupeyinta isibhakabhaka.
Thatha ithuba leentsuku zasehlotyeni ngokuphuma uye edokhini ukuze usebenzise enye yeekayak ezi-2, i-kayak ephindwe kabini, okanye isikhephe esilandelelanayo ukuze udibanise nabanye abalobi, izikhephe, kunye nezikhephe ezikhawulezayo zithatha ithuba leSaint Clair. Yonwabela indawo esecaleni egqibeleleyo kwaye ubambe isihlalo kwiibhentshi kunye nezitulo ezijingayo ezifunyenwe kwipropathi xa ulungele ukoma.
Xa impepho epholileyo yasechibini ivuthuza ngaphakathi, ngena ngaphakathi kwaye ufudumale malunga neziko legesi. Kukho i-2 endlwini, enye phezulu kunye neyodwa ezantsi, ehamba kunye ne-TV's flat-screen kunye ne-couchs epholileyo, ukuze wonke umntu aphumle ngolonwabo.
Cofa iTV kwaye uye kulala kwelinye lamagumbi asezantsi kunye neebhedi ezingamawele ezi-2 kunye nebhedi ehonjisiweyo yendlovukazi, okanye phezulu ukuya kwi-Master kunye nebhedi enkulukazi.
4.81 out of 5 stars from 36 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-36
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi36
Ngaphantsi kwemizuzu eli-15 kude yiBilly Frank Jr. Nisqually National Wildlife Refuge. Thatha i-Nisqually boardwalk trail kumgama oziisiqingatha seemayile ngaphezulu kwemigxobhozo kunye neendawo zendalo ezinyakazela izilwanyana zasendle kunye neentlobo zeentaka ezingaphezu kwama-200!
Ukurhweba amatye okutsiba kwipoker chips kwiRed Wind Casino, imizuzu nje emi-6 kude nendlu. Thatha isihlalo kwenye yoomatshini abali-1,500 abafakwayo, ubeke umngcipheko kwiroulette, okanye uvavanye izakhono zakho kwiblackjack kude kube kusasa!
Intliziyo ye-Olympia ikude nje yimizuzu engama-20 kwabo banethemba lokuchitha imini bethenga, besitya, kwaye bajonge isixeko esikhulu. Wander the Farmer's markets, izikhululo zabathengisi kunye neboutiques ezidwelisa izitrato zaseOlympia ukufumana ezimbalwa ezithandwayo zasekuhlaleni.
Inkulu kwiintsapho ezityelela amajoni e-JBLM, ikhaya yimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka kwisiseko. Ikwakufuphi ne-Washington State Capital, ilungele abaxhasi kunye nabawisi-mthetho.
Umbuki zindwendwe ngu- Evolve
Izimvo eziyi-13 829
I-Evolve yenza kube lula ukufumana kunye nokubhukisha iipropathi ongasokuze ufune ukuzishiya. Ungaphumla usazi ukuba iipropathi zethu ziya kuhlala zikulungele kwaye siyakuphendula ifowuni 24/7.Kungcono, ukuba kukho into evaliweyo malunga nokuhlala kwakho, siya kuyilungisa. Ungathembela kumakhaya ethu nakubantu bethu ukuba bakwenze uzive wamkelekile-kuba siyazi ukuba iholide ithetha ntoni kuwe.
I-Evolve yenza kube lula ukufumana kunye nokubhukisha iipropathi ongasokuze ufune ukuzishiya. Ungaphumla usazi ukuba iipropathi zethu ziya kuhlala zikulungele kwaye siyakuphendula…